Kan Ajjeesuufi kan Hidhu Mootummaa Kan Gaafatamu ABO (inbox) – Ayyaantuu Online
[ August 2, 2021 ] Ethiopia: Growing concerns for unity as Tigray conflict spreads	English
[ August 2, 2021 ] How the Tigray defense force is winning	English
[ August 2, 2021 ] Dutch Runner Who Fell During Her Race Went On To Win Gold. She’s Aiming For 2 More	English
[ August 2, 2021 ] Africa can prevent Ethiopia from going down Rwanda’s path: here’s how	English
HomeAfaan OromooKan Ajjeesuufi kan Hidhu Mootummaa Kan Gaafatamu ABO (inbox)
By Simbirtuu Barii, Gola Oromiyaa irraa
Yeroo ilma ajjeesanii haadha irra teesissan WBOn eessa jiraa?
Gaaffii kallatti hin qabne, gaaffii gowwaa.
Deebii: Eenyu kan ajjeesaafi hidha turee? Kan ilma ajjeesee haadha irra teessisee Mootummaa ADUI mitii? Harrawoo eenyu kan bulchaa jiruu? Mootummaa ADUI mitii? Eeyyee garaagarumman jiru gadaatu TPLF irraa gara OPDO tti darbe. Hanga waloon kun hin digamnetti waanti jijjirame hin jiru. Kanaaf, gaafatamuu kan qabu mootummaa kana. Ajjeessanii irraa nama naqabutu dhibeen seera duratti fudhatama hin qabu. Akka seeraatti gaaffiin ka’uun irra ture warri gochaa kana raawwatees raawwachisees seeratti nuuf haa dhiyaatanii ture. Kan dandeessu dhaanii jennaan gowwaan galee nitii dhaanee jedhan.
ODP yeroo ammaa miseensota ishee waltajjii OMN tti fayyadamtee ABO/WBO irratti duulaa jirti. Bor ammoo Jawaar Mohaammadii fi OMN irratti ta’a. Garuu JM kana akkamitti hubachuu dadhabee?
Kan Kamaal Galchuu faarsa; kan Oromoo diigeefi lixatti duula sanyii duguuggaa raawwata jiru.
Kan ABO ganamaa fidaa jedhee iyyaa. Mee eessa haa dhufan ABOn ganamaa sun? Gariin qabsoo keessatti wareegamanii jiru, gariin jaarmiyaa siyaasa mata isaanii itti amanan dhaabbatanii jiru. Keessan dhiisaa koottaa nu hiriraadhaa? Qabsaa’an ni darba qabsoon itti fufa. Kan jiru haa cimsannu irratti duuluu dhiisnee. Taa’anii kaa’anii ol ka’anii fuudhu dadhabuu nu haa oolchu.
“Ob Daawwid yeroo ammaa sirrii hojjetaa hin jiru” Jawaar Mohammed. Haadhan caala jette intallii. – Mee badii qabsa’aa gameeyyii kanaa tokko tokkoon tarreessi naa jedhaanii. Danda’amaa? Kaayyoo isaa ganamaatti waanna cicheefii? Oromoon ammayyuu hin bilisoomne wanna jedheefii? Yoo tahe ifa godhi. Harras Oromoon ajjeefamaa jira. Saaniyyuu xiyyaaran. Him! kana xaaliyaaniinuu saba Oromoo irratti gama dhiyaan hin raawwanne. Oromoon harras hidhamaa jira. Qee’ee abbaa isaa irraa buqqa’aafi godaanaa jira. Uummati
Harargee, Boranaa, Gujii, Wallaggaa, Finfinneefi naannoo ishee dhugaa haa bahu kana.
– Gaaffiin afaaniifi abbaa biyyummaa Oromoo deebi’ee jiraa?
– Alaabaan Oromoo kabajamaa jiraa?
Miti, ooggantooti ODP farda ormaa yaabbatanii gulufaa jiru. Okoleenis eelman kiyya qiraacii hin darbu jette adurreen.”
Mootummaa Ce’umsaa Oromiyaa kan jedhu maali? Jalqaba maaliif akka mootummaan ce’umsaa barbaachise lafa keenya. Nuti…
Interviews with Dawud Ibsa, Araarsa Bikila, Odaa Xasse, Jan 20, 2019